Sonos Roam, uhlalutyo ngexabiso kunye neempawu | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 06/04/2021 15:00 | ngokubanzi, Reviews
Zininzi iindlela ezizezinye ezivakalayo, ngakumbi xa sithetha ngokuhamba, kwaye ayikhathazi ukwehla echibini okanye uye kwi-barbecue kunye nesithethi sethu esihlakaniphile kwaye ulisebenzise ukuze uphile emva kwemini kunokwenzeka. USonos uqaphele impumelelo yokuHamba kwaye uye wafuna ukuyenza incinci kwaye inomdla ngakumbi.
Fumanisa kuthi zonke izinto ezinazo kwaye kutheni uSonos ngoku ebanga itrone yezipikha eziphathwayo.
Njengakwezinye izihlandlo ezininzi, sigqibe kwelokuba siluphelekeze olu hlaziyo kunye nevidiyo kwisiteshi sethu I-YouTube apho uya kukwazi ukubona ukungabikho kwebhokisi, ukuseta amanyathelo kunye nezinye izinto ezipholileyo ezinje ngovavanyo lwesandi. Sincoma ukuba uhambe ngejelo lethu kwaye uthathe ithuba lokujoyina i-Actualidad yoluntu lweGajethi, kuphela emva koko sinokuthi siqhubeke nokuzisa owona mxholo mhle sikuncede kwizigqibo zakho. Khumbula ukuba ibhokisi yokuphawula inokugcina yonke imibuzo yakho, ungathandabuzi ukuyisebenzisa. Ingaba uyithandile? Ungayithenga iNonos Roam ngo LONTO.
1 Izixhobo kunye noyilo: Yenziwe kwi-Sonos
3 I-TruePlay ezenzekelayo kunye ne-Sonos Swap
4 Ukuzimela kunye nomgangatho weaudio
Izixhobo kunye noyilo: Yenziwe kwi-Sonos
Ifemu yaseNyakatho Melika iyakwazi ukwakha izixhobo ngobunikazi bayo, kwaye ibisenza njalo iminyaka emininzi. Kule meko, iSonos Roam isikhumbuza enye imveliso yophawu, Sonos Arc. esiyihlalutye kutshanje. Kwaye ukunyaniseka, kufana nekopi encinci yoyilo olunomtsalane kwaye uninzi lwezincomo luye lwasebenza kwinkampani. Inobungakanani obulinganayo ngokufanelekileyo kunye nezinto zohlobo lwayo, ezinomzimba owahlukileyo ophelisa ngokupheleleyo inayiloni ukubonelela ngokuchaseneyo. Siphinde sakhetha imibala emibini, emhlophe kunye emnyama ngombala ogqityiweyo.
Ubungakanani: 168 × 62 × 60 mm
Ubunzima: I-460 gram
Ngokucacileyo ayisisixhobo sokukhanya, kodwa kukuba akukho sithethi sizihloniphayo esiya kuba nobunzima bokukhanya, kule mveliso yeemveliso ukukhanya okugqithisileyo kudla ngokuthetha umgangatho odiyo ombi. Oku akwenzeki nge Sonos Roam, ekwabandakanya isetifikethi se-IP67, ayinamanzi, Ukumelana nothuli kwaye kunokuntywiliselwa emanzini kubunzulu bemitha enye ukuya kuthi ga kwimizuzu engama-30 kuxhomekeke kuphawu. Khange siwakhangele la magama ngezizathu ezicacileyo, kodwa ubuncinci I-Sonos Move iyisiqinisekisile kuthi.
Njengoko kusenzeka ngamanye amaxesha, uSonos usungula imveliso eyilelwe ngokufanelekileyo ukuba isetyenziswe Wifi ke ngoko ibandakanya ikhadi lenethiwekhi elihambelana nayo nayiphi na i-router 802.11 b / g / n / ac 2,4 okanye 5 GHz ngokukwazi ukudlala ngaphandle kwentambo. Oku kunomdla wokudibana neenethiwekhi ze-5 GHz, siyazi ukuba azikho izithethi ezininzi ezihambelanayo, kule Sonos Roam ayisileli. Nangona kunjalo, akufuneki silibale ukuba uSonos yikhompyuter encinci emile njengesithethi, ifihle entliziyweni yayo a I-1,4 GHz quad-core CPU enobugcisa be-A-53 Esebenzisa inkumbulo 1GB SDRAM kunye ne-4GB NV.
Ukuhambelana kweKhaya kuGoogle
Ukuhambelana kweAmazon Alexa
Ukuhambelana kwe-Apple HomeKit
Konke oku kwenza ukuba Sonos uzulazula isixhobo esizimeleyo esiye naso Bluetooth 5.0 kulawo mathuba asisa kude nekhaya, kunye nale nto yenziwe nguSonos Roam. Ngaphandle kwalokhu, siya kuba nakho I-Apple AirPlay 2 eyenza ukuba ihambelane ngokupheleleyo nezixhobo zenkampani yeCupertino kunye nayo Apple HomeKit xa kuziwa ekudaleni imicimbi ye-multiroom ngendlela elula. Konke oku kusivumela ukuba sonwabe Spotify Qhagamshela, Apple Music, Deezer, kunye nokunye okuninzi.
I-TruePlay ezenzekelayo kunye ne-Sonos Swap
Ixabiso elongeziweyo leSonos Roam ayisiyiyo le ingentla, nangona inokubonakala ngathi iyaphikisana kuba yeyona Sonos yexabiso eliphantsi kwintengiso, sifumana iisoftware kunye nezixhobo zehardware ezingafakwanga nguSonos kuzo zonke izithethi ezikrelekrele. . Siqala ngokutshintsha kweSonos: Xa uqhagamshele kwi-Wi-Fi kwaye iqhosha lokudlala / lokuphumla kwiRoam licinezelwe kwaye labanjwa, isithethi siya kuthi sibonakalise ezinye izithethi ze-Sonos kwinethiwekhi yakho ukukhupha isandi se-ultrasonic frequency. Umculo uya kugqithiselwa kwi-Sonos Roam uye kwisithethi esikufutshane ngemizuzwana.
Sithetha ngoku ngokuDlala ngokuZenzekelayoUninzi lwenu luyazi ukuba i-TruePlay yinkqubo yohlalutyo lwesixhobo seSonos esivumela ukuba sifumane esona sandi sihle kumzuzu ngamnye. Ngoku sinako ukwenza umsebenzi ozenzekelayo usiqinisekise ukuba iSonos TruePlay ihlala isebenza ukuze isinike esona sandi simnandi naxa sixhunyiwe ngeBluetooth, into ebaluleke kuphela kumzuzu weSonos Roam.
Ukuzimela kunye nomgangatho weaudio
Siya ngoku kumagubu, ngaphandle kokuchazwa kwi-mAh sinezibuko le-15W le-USB-C (iadaptha ayifakwanga) kunye Inkxaso yokutshaja ngaphandle kwamacingo Ewe, itshaja yakhe kufuneka siyithenge ngokwahlukeneyo nge-euro ezingama-49. I-Sonos isithembisa iiyure ezili-10 zokudlala, eziye zafikelelwa kwiimvavanyo zethu ngokude nje ukuba uncedisi welizwi aqhawulwe kwaye ivolumu ingaphezulu kwama-70%. Ukuhlawulisa siya kuthatha ngaphezulu kweyure ngezibuko le-USB-C, khange sikwazi ukuvavanya itshaja yeQi.
Iklasi ezimbini zeHamplifier yedijithali
Ngokubhekisele kumgangatho wesandi, Ukuba siyithelekisa nezinye iimveliso kuluhlu lwazo ezinjengee-Ultimate Ears Boom 3 okanye isithethi seJBL sifumana imveliso ecace gca. Ewe kulungile sinengxolo engaphezulu kwe-85%, Kubonakala kungenakuthinteleka ngenxa yobungakanani bemveliso, ngendlela efanayo ukuba umgangatho wayo uphezulu kakhulu, iibhloko zigxininiswe ngakumbi. Ndothuswa ngamandla amakhulu esi sixhobo, uluhlu lwemakrofoni edibeneyo. Konke oku kuyenza ukuba ibe sesona sithethi sinamandla kunye nesona siphezulu siphathekayo kwintengiso ye- € 179., kwaye ngelishwa ayikhuthazi ixabiso eligqithisileyo xa kuthelekiswa nokhuphiswano.
Ithunyelwe nge: 6 April 2021
Utshintsho lokugqibela: 3 April 2021
Izinto ezikumgangatho ophezulu kunye noyilo
Ukungaveli konxibelelwano kwisithethi esihambelanayo
Umgangatho wesandi kunye namandla
Spotify Qhagamshela kunye nezinye izibonelelo zeSonos S2
I-Alexa, ikhaya likaGoogle, kunye nokudibana kwe-AirPlay 2
Qi kwitshaja ayifakwanga
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Sonos Roam, encinci kodwa enobukrakra [HLOLA]
I-TCL TS6110, indlela enexabiso eliphantsi yokwakha ithiyetha yasekhaya eneDolby Audio